Mamy Manaikitra Ny Sioka Ho an’ny Depiote Kyrgyz Malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2012 9:44 GMT
Nanipy adihevitra ilay solombavambahoaka Kyrgyzy tao Kyrgyzstan, mikasika ny hoe: rehefa inona ny mpanao gazety no afaka manatsonga sioka amin'ny Twitter ho halefany vaovao na tsia. Nivinitra i Shirin Aimatova, mpikambana ao amin'ny Antoko Ata-Meken amin'izao fotoana izao raha namoaka ny siokany nandritra ny olan'ny antenimiera farany teo ny bilaogim-baovao ao an-toerana sy ny vavahadim-baovao Kloop.kg. Nanambara i Aitmatova fa nampiasaina tsy nahazoan-dalana ny siokany ary nalaina tao amin'ny kaontiny “manokana” ary ankehitriny niato ny kaonty Twitter @thelostroom.
Shirin Aitmatova, solombavambahoakan'i Kyrgyzstan. Nahazoan-dalana avy aminy ny famoahana ny sariny.
Fanta-daza amin'ny fandefasana sioka maro mivantana avy ao amin'ny antenimiera i Aitmatova, saingy toa mifantina ireo izay afaka sy tsy afaka mizara ny siokany kosa izy. Olona maherin'ny 1.200 no mpanaraka ny kaonty “tsy ofisialy” sy “manokana” an'i Aitmatova, mbola tsy nihaona taminy mivantana avokoa ny sasany tamin'ireo mpanaraka azy. Amin'izany indrindra, mikasika ny mety ho firodanan'ny governemanta atsy ho atsy ao amin'ny firenena ireo siokany.
Namaly [ru] ny fitarainan'i Shirin Aitmatova tamin'ny valinteny ofisialy ny ekipa mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny kloop.kg. Nilaza ny valintenin'ilay mpanoratra Bektour Iskender, fa toy ny mpanao politika Kyrgyzy rehetra i Shirin Aitmatova, ka azo sokajiana ho olo-malaza. Vokatr'izany, azo raisina ho toy ny mahasoa ny vahoaka ireo vaovao avoakany amin'ny alalan'ny kaonty twitter-ny, indrindra raha mahakasika ny fiainam-pirenena izany fa tsy ny fiainany manokana. Iskender nanasongadina hoe [ru]:
Sehatry ny fifandraisana amin'ny endriny vaovao ny Aterineto, mitovy amin'ny fifandraisana ivelan'ny tsy misy serasera “offline” ihany ny fitsipika sy ny lalàna amin'izany.
Fantatry ny mpiserasera Kyrgyzy anefa ny fifandirana misy eo amin'ity fampahalalam-baovao malaza ity sy ilay solombavambahoaka mamim-bahoaka tao amin'ny aterineto. Nizara roa ny hevitry ny olona, somary mifamaly momba ny fihenjanana eo amin'ny andraikitry ny mpanao gazety amin'ny tombotsoam-pirenena sy ny zon'ny olo-malaza amin'ny fanajana ny fiainany manokana.
Mpaneho hevitra iray, J.S., nanao fampitahana masiatsika [ru] ny fihetsiky ny Kloop amin'ny famakian-trano.
Fitsabahana fahatany amin'ny fiainan'olona manokana ny famoahana ampahibemaso nataon'ny Kloop, ary toy ny fikasana te-hanamarintena fotsiny noho ny fangalaran-javatra tao an-trano nivahiniananao ny antso atao amin'ny fisokafan'ny adihevitra.
Tsy niombo-kevitra [ru] tamin'izany anefa i Reclaim Specialist :
Marina izany, raha nisy zavatra nosoratana, andraikitry ny mpanao gazety no mamoaka izany.
Erica Marat, mpandalina politika ao Kyrgyztan sy manam-pahaizana momba ny olana aram-piarovana ao Azia Afovoana nanao antso [ru] tao amin'ny Twitter mba handanjalanja ny tati-baovao havoaka:
Hitako fa tafahoatra ny ataon'ny Kloop manoloana ny twitter an'i Aitmatova. Tsy tokony hifototra amin'ny sioka aminà kaonty tokana mikatona ny tena asa fanaovan-gazety.
Amin'ny zava-mitranga, ahitana zavatra tafahoatra fa tsy ny siokan'i Aitmatova ihany ny fitantarana nataon'ny Kloop momba ny firodanan'ny fitondrana atsy ho atsy. Kanefa ny ampitso, mbola nitohy niteraka adihevitra be ny momba ny asa fanaovan-gazety amin'ny Twitter, tsy mahagaga, nahitana vinavina mahaliana amin'ny teny anglisy avy amin'i @linarzairov , @bektour sy @skyblue_kate tao amin'ny Twitter.
Ary tamin'ny 5 Desambra, raha mbola liana ireo mpiserasera marobe, nofafan'i [ru] Aitmatova ny kaonty Twitter-ny, nilaza izy fa “leo” ny tolotra fibilaogevana bitika, tsy namela intsony ireo mpiserasera Kyrgyzy hanaraka vaovao mivantana avy ao amin'ny antenimiera.
Na dia izany aza, na dia sokajiana ho solombavam-bahoaka mivantambata-piteny, mpiaro ny zon'ny ankizy sy zanaka vavin'ilay mpanoratra malaza indrindra ao Kyrgyzstan aza i Aitmatova , tsy dia malaza loatra amin'ny fahaiza-maneho hevitra izy. Tamin'ny 29 Novambra, ohatra, @azat25 nizara [ru] ny siokany momba ny fanapaha-keviny handao ny antokony ao amin'ny antenimiera Ata-Meken:
Omaly, mazava tamiko fa na dia teo aza ny fanajako sy ny fitiavako tafahoatra an'i [lehiben'antoko] Tekebayev, Tsy afaka mijanona ao amin'ny antoko aho [Ata-Meken].
Ny ampitso, nanambara [ru] i Aitmatova: “lasa aloha loatra ny fanambarako ny fialako ao amin'ny antoko”.
Manantena ny mpiserasera fa hiverina tsy ho ela ao amin'ny Twitter-ny izy. Lazat Takyrbashova, ohatra, iray amin'ireo mpiserasera maro nanoro-hevitra [ru] fa ny fiankinan-doha amin'ny tambajotra sosialy no hampiverina azy amin'ny Twitter.
Mino aho fa hiverina tsy hoe ela izy. Tsy haharitra ela izy…
Anisan'ny Tetikasam-piofanana an'ny GV Azia Afovoany ao amin'ny Oniversite Amerikana ity lahatsoratra ity.